Egretia ego taa
Egretia calculator online, onye ntụgharị Egretia. Egretia ego taa na ahia ahia ego di iche iche.
Egretia ego na Nigerian naira (NGN)
1 Egretia (EGT) nhata 0.36 Nigerian naira (NGN)
1 Nigerian naira (NGN) nhata 2.78 Egretia (EGT)
Ntụgharị Egretia na Nigerian naira. Taa Egretia ọnụego Ka Nigerian naira na 04/06/2020.
Egretia ego na dollars (USD)
1 Egretia (EGT) nhata 0.000927 dollars (USD)
1 dollar (USD) nhata 1 078.64 Egretia (EGT)
Ntụgharị Egretia na dollar. Taa Egretia gbadaa dollar na 04/06/2020.
Gwọ maka Egretia maka taa 04/06/2020 - nkezi ọnụahịa dịka nsonaazụ nke azụmahịa azụmaahịa Egretia n'ime mgbanwe taa. Ọnụ ego nke Egretia esiteghị n'aka ụlọ akụ, dịkwa ka ọ dị na ego oge gboo. Ileba anya na uzo Egretia mgbanwe mgbanwe n'ịntanetị nwere ike inye aka ịkọ ọnụego Egretia echi. Na Egretia Ọnụahịa taa 04/06/2020 ọrụ ntanetị na cryptoratesxe.com bụ n'efu.
Egretia ngwaahịa taa
Egretia na mgbanwe taa bụ ibe maka azụmaahịa ego ego Egretia na mgbanwe nke ụwa ego ego. Ọnụahịa Egretia na Nigerian naira bụ ntụpọ dịzi adị nke egosi ọnụahịa Egretia ka Nigerian naira. A na-enweta ọnụahịa nke Egretia na Nigerian naira sitere na ọnụahịa nke azụmahịa Egretia megide dollar na site ọnụego nke Nigerian naira megide dollar nke bank etiti guzobere taa. Na mgbanwe azụmahịa, ị ga - ahụ azụmahịa ozugbo Egretia - Nigerian naira. Ha na-enye ezigbo ọnụahịa azụmahịa Nigerian naira - Egretia. Mana maka ọnụego nke otu, usoro algorithm anyị na-agbakọ azụmaahịa Egretia, ọ bụghị naanị Nigerian naira.
Egretia Ọnụ ego na dollar - ọnụego ala maka Egretia. Ego nke uzo ahia dollar site na Egretia buru ibu karia na ego ndi ozo. Gwọ maka Egretia maka taa 04/06/2020 bụ usoro dị mfe: ọnụahịa nke Egretia * maka ego ntughari nke Egretia. Ọnụ ahịa Egretia maka taa anyị gbakọtara site na itule uru nke Egretia na azụmaahịa niile na ọnụego mgbanwe dị iche iche.
Ego si Egretia uru nye Nigerian naira bụ atụmatụ ego nke Egretia na dollar tụgharịrị na Nigerian naira na ọkwa nke ugbu a. A na-ebugo ahịa azụmaahịa niile maka taa na nchekwa data na nkezi Egretia na-agbakọ ọnụego mgbanwe dollar, mgbe ahụ, ọ na-atụgharị gaa na Central Bank nke dollar US megide Nigerian naira, anyị na-enweta Egretia ka Nigerian naira ọnụego mgbanwe maka taa. Ọ bara uru ịhụ uru dị na Egretia na Nigerian naira na azụmahịa ndị a kpọmkwem. Enwere ike ịchọta ozi banyere nke a na tebụl bidding na ibe a. Ofgwọ nke Egretia, na iche ahịa nke Egretia na US dollar, dabere na oke nke ire na ịzụta nke Egretia n'otu azụmahịa
A na-akpọ ọrụ mkpokọta weebụ ahaziri iche maka mgbakọ na mwepụ ego ego. Otu ọrụ ntụgharị ama ama Calculator Egretia na Nigerian naira n'ịntanetị bụ ọrụ kachasị ewu ewu n'etiti ego ndị ọzọ. Ọ ga-agbakọ ọnụego ntụgharị ahụ na klas Nigerian naira maka zụọ ma ọ bụ ọrịre maka Egretia ị tinyere. Ihe oru ngo a nwere oru ihe nlere ego ego di iche na ntaneti. Convertzọ ntụgharị kachasị ewu ewu bụ ntụgharị nke Nigerian naira na Egretia ma ọ bụ na Egretia na Nigerian naira.